काठमाडौं, २६ जेठ: कोरोना भाइरस लकडाउनका कारण रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन र मानिसहरू घरमा बस्न बाध्य छन्। यस कारणले गर्दा, धेरै परिवर्तनहरू देखापर्न थालेका छन। यी मध्ये दुई परिवर्तनहरू यो पनि हुन्- एउटा यो कि मुसाहरुले आफ्ना लागि नयाँ स्रोतहरू खोज्न सुरु गरेको छ दोस्रो तिनीहरूको व्यवहार पनि परिवर्तन भएको छ।
गत हप्ता रोग नियन्त्रण (सीडीसी) को लागि अमेरिकी केन्द्रहरू द्वारा जारी चेतावनी अनुसार खानाको लागि घुम्ने मुसाहरुको व्यवहार असामान्य र रिसाउन भएको छ। चेतावनीमा भनिएको छ,“ रेस्टुरेन्ट बन्द भएको कारण मुसाहरुले पर्याप्त खानेकुरा पाइरहेको छैन, विशेष गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा।”
सीडीसीले अझै भनेको छ, “मुसा प्रायः यस ठाउँमा पाइने खाना र फोहोरमै भर पर्छ।” खाद्यान्नको नयाँ स्रोतको खोजीमा, मुसाहरू अब चारैतिर घुमिरहेका छन् र यही कारणले गर्दा उनीहरू अब विश्वमा सार्वजनिक रूपमा बढी देखिएका छन्।
फ्रान्सेली क्वार्टर अफ न्यु अर्लिन्स यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। फेब्रुअरीमा, हजारौं व्यक्तिहरू यहाँ जम्मा भए जो जाज क्लब, बार र रेस्टुरेन्टहरूमा गए। तर केहि हप्ता पछि, भाइरस संक्रमणको कारण, लुइसियाना पर्यटक गन्तव्यका सबै मनोरञ्जन स्थानहरू बन्द गर्नुपर्‍यो।
यसैकारण मुसा तिनीहरूको आधारबाट बाहिर निस्के। संयुक्त राज्यका अन्य शहरहरू जस्तै वाशिंगटन र न्यूयोर्कको अवस्था पनि यस्तै थियो। अमेरिकी प्रमुख रोडेन्टोलॉजिस्ट रोबर्ट कोरीगनका अनुसार मुसाहरुको यस्तो रिसाहा व्यवहार मानवप्रति नभई अन्य मुसाहरु कतैबाट खानेकुरा पाउनको लागि दरार र प्वालको खोजीमा भौंतारिरहेको छ। बीबीसी न्यूज ब्राजिलसँगको कुराकानीमा उनले भने, “यसको मतलब यो होइन कि त्यसले मानवलाई आक्रमण गर्ने वा काट्ने छैन।”
मानव मासु खाने
कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण, विश्व जनसंख्याको एक तिहाइ जनसंख्याले भर्खरका महिनाहरूमा आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेको छ।धेरै देशहरूमा घरहरूमा बस्ने मानिसहरूले लामो समयसम्म घरमा फोहोर घटाइदिएका छन,, जसमा मुसा भर पर्छन्। र यो कारण हो कि मुसाहरु पनि उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य छन्।
अप्रिलमा, बेलायतको नेशनल पेस्ट टेक्निसियन एसोसिएसनले चेताउनी दिएका थिए “स्कूल, पब, रेस्टुरेन्ट, होटल, पर्यटन स्थल र अन्य सार्वजनिक स्थानहरू सामाजिक दुरीका लागि बन्द गर्दा खराब नतिजा हुन सक्छ।”एसोसिएसनले भन्यो कि यदि खाना उपलब्ध भएन भने हिंस्रक जीवहरूले खाली भवनहरूमा बच्चाहरूलाई जन्म दिन सक्छन् वा खानाको खोजीमा बाहिर जान सक्छन्।
निराशाको कारण, मुसाले आफ्नै कालोनीका अन्य मुसाहरुलाई आक्रमण गरिरहेका छन्।संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूमा मुसा सम्बन्धित रोगहरूको नियन्त्रणका लागि परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने करिगन भन्छिन्, “भोकले एक मुसाले अर्को मुसा खान सक्छ।”तिनीहरू भन्छन पहिले जुन ठाउँमा मुसाहरु सजिलैसँग खाना प्राप्त गर्थे, अब तिनीहरू निराश भइरहेका छन्। विज्ञहरूले यस्ता आक्रमणको प्रमाण देखेका छन् र मानव मासु खानेको प्रमाण पनि भेट्टाएका छन्। उनिरु चरम भोकमरी अवस्थामा सामान्य छ। वर्तमान परिस्थितिमा जस्तो भइरहेको छ। उनि भन्छन,“तिनीहरू एक अर्कालाई आक्रमण गर्दैछन्, मार्दैछन् र खाइरहेका छन्।”
वातावरण अनुकूलन मा विशेषज्ञ
यस अघि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा क्यारिगनले भनेका थिए, “भोकाएको मुसा शान्तिपूर्वक बस्न सक्छ र मुसा नभएका अन्य ठाउँमा घुम्न सक्छ।” विज्ञहरू विश्वास गर्छन् यी यस्ता प्राणीहरू हुन् जुन आफैंको लागि खाना खोज्नमा एकदमै विशेषज्ञ छ र ढोका, प्लास्टिक र तिनीहरूका कडा दाँतले जाल जस्ता चीजहरूलाई नष्ट गर्न सक्छ।उनि भन्छन, “तिनीहरू जताततै छन्। यदि उनी चीजहरू ग्रहण गर्नमा माहिर नभएको भए उनी संसारभर फैलिने थिएनन्।”यद्यपि, ठूलो संख्यामा मुसा हुनुको मतलब शहरहरू ध्वस्त हुने छैन।अधिकारीहरुका अनुसार, नयाँ नियन्त्रण प्रविधिको परिचय दिन यो सही समय हो।
किन मुसाहरु समस्यामा छन्?
खानाको खोजीमा घुम्ने मुसाको समूहले कुनै घर र सम्पत्ती नष्ट गर्न सक्दछ। तिनीहरूले रोग सार्न सक्छ।करिगन भन्छन, “मुसाले कुनै पनि कोठामा पुग्न सक्दछ, नर्सिब होम वा अस्पताल सम्म जान सक्छ।”आधिकारिक रूपमा मुसाहरु ५५ विभिन्न रोग कारणहरूसँग जोडिएको छ। यद्यपि कोभिड-१५ सँग उनीहरुको सम्बन्ध सम्बन्धी कुनै रिपोर्ट आएको छैन।मुसाले घरहरूमा काठ काट्छ, बिजुलीको तार बिग्रछन्, जसले घरहरुमा आगो लाग्ने खतरा पनि छ।
मुसाहरु घर बाहिर कसरी राख्ने?
मुसालाई घरबाट बाहिर राख्ने एउटा तरिका भुइँ तल्लााका प्वालहरू बन्द गर्नु हो। पाइपहरू र त्यस्ता अन्य चीजहरू पनि सील गर्नुहोस् जहाँबाट मुसाहरु प्रवेश गर्ने डर छ। घर भित्र धेरै थोरै ठाउँहरू छन् जहाँ तिनीहरू लुक्न सक्दछन्। यी ठाउँहरू सफा गर्नुहोस्।त्यस्तो भाँडामा सँधै खाना राख्नुहोस् जुन मुसाले खोल्न सक्दैन। यदि तपाइँको घरमा मुसा छ भने, कोर्रिगनले सुझाव दिन्छ कि तपाइँ यसको लागि धरापहरु राख्नोस वा मुसा मार्ने पेशेवरहरूको मद्दत लिनुहोस्। उनि भन्छिन, “यदि तपाईंले कोरोना संक्रमणको अवधिमा घरमा मुसा देख्नुभयो भने, तपाईंले तिनीहरूलाई समात्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।” ( बीबीसी)